स्वर र सुन्दरता दुवैको धनी इन्दिरा जोशी, हेरौं १५ तस्विर
नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा निकै जमेकी चर्चित गायिका हुन् इन्दीरा जोशी । इन्दिराको जन्म बि. सं. २०४३ (जुलाई १८, १९८६) मा उनका बुवा-आमाको सात ओटा सन्तानहरू मध्ये उनी पाँचौँ सन्तानको रूपमा नवलपरासीमा भएको थियो।
गायनमा चर्चामा आइरहने इन्दीरा जोशीको स्वर निकै सुमधुर र निखारिएको छ । जति उनको स्वरको चर्चा हुन्छ त्यति नै उनको सौन्दर्यको पनि चर्चा हुने गर्छ । नेपाल आइडलको जज बनेदेखि पछिल्लो समय उनका फ्यानहरू निकै बढेका छन् । जब उनी स्टेजमा चढेर आफ्नो गीतमा घुल्न थाल्छिन् तब दर्शकको ध्यान उनी तर्फ हुन्छ ।
उनका अहिले सम्मका धेरै गीतहरू हिट भएकाले नै होला उनका फ्यानहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । जति उनको स्वर सुमधुर र निखारिएको छ त्यति नै उनी सुन्दर छिन् ।
इन्दिरा जोशीले डोरेमी सङ्गीत एकेडेमीबाट सङ्गीत सिकेकी हुन् । उनलाई उनको सङ्गीत व्यवसायमा स्थापित गर्नमा नेपाली तारा कार्यक्रमको भूमिका रहेको छ।
नेपाली साकिरा भनेर पनि चिनिने उनले बेलाबेलामा आफ्ना सुन्दर तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिरहने गर्छिन् ।
हेर्नुहोस् उनका केही तस्बिरहरू